tolis.co Nyeredzi Kufanotaura May 2022 Nekuti Zvese Zodiac zviratidzo
Nyeredzi May 2022
Zviri Mukati ▾
Live Support Rubatsiro Bata
Nyeredzi Nyeredzi Inoongorora @ Kufembera Zvinyorwa
Iwe unozoratidzwa nekugara zvakanaka uye netariro nhasi. Iwe uchada munhu wese uye iwe uchazoda kunakidzwa. Iro izuva rakanakawo rekugadzirisa kushongedzwa kweimba yako.
Rudo: Zuva iri rinozoita kuti utende kuti kunyangwe hukama hudiki uye hunonetsa hunogona kuyerera zvichiteedzana dzimwe nguva. Iwe uchave unofara kwazvo uye mune yakanaka mamood nhasi uye iwe uchave uine kudiwa kwekunakidzwa uye panguva imwechete uchiratidza hunyoro hwako hwese.
Nyanzvi: Zvirinani kunzvenga hofisi nhasi kunze kwekunge uine zvinhu zvakanaka zvakapoteredzwa! Zvese zvimwe zvinotora kusingafadzi kutendeuka, izvo zvinowedzerwa nekuvapo kwako uye zvinoita kuti kusavapo kwako kukanganwike. ... Zvimwe
Iko kune mukana wekuti iwe ungangonzwa kumwe kushushikana, kusagadzikana uye kusava netariro. ... Zvimwe
Kune dambudziko, iro rinogona kunge riri risinganzwisisike. Unoshatirwa uye haufambidzane nevamwe zvakanaka.
Rudo: Panogona kuve nezvinetso muhukama nevakomana kana vasikana kana kukwezva kwenguva pfupi pabonde, izvo zvisingatungamiri kune chero chinhu chikuru. ... Zvimwe
Kunzwa kunouya kumusoro, kwete hazvo nekuda kwechimwe chinhu chekunze. Uri kutsvaga kwehukama uye chengetedzo munzvimbo yako yepamoyo kana yemhuri.
Rudo: Unonzwa kuremerwa nemanzwiro uye vakadzi vanogona kutamba chinzvimbo chakakosha kwazvo muhupenyu hwako, nekuti ivo vanonyatsokubatsira iwe kuti ugone kuratidza moyo wako. ... Zvimwe
Kuvimba uye kushanduka zvinoita kuti unakidze vamwe. Iwe unogona ikozvino kutora matanho, izvo zvicharatidza kuve chaizvo chaizvo.
Rudo: Nhasi uchave unokwezva kwazvo. Unogona kunge uine kukunda uye kutamba nerudo kana kutamba nerudo. Izvo zvakakosha kuti iwe ugone kupedzisa kutamba foreplay zvakanaka. Erooticism yako inokurudzira vamwe.
Nyanzvi: Iyi inguva apo iwe paunonzwa kuti haugone kushanda zvinobudirira uri wega sevamwe uye izvi ndezvekuti iwe unoda muyero wekusununguka. Chivimbo chako chinoita kuti vamwe vade kushanda newe. Kana zvakadaro, usazeza kutora danho rekutanga. ... Zvimwe
Tsinga dzinozove chiitiko chedambudziko kupaza nemumwe munhu kana mumwe munhu. Iko kune mukana wekuti iwe urwe naamai vako, iwe unoshaya kugadzikana uye kutsunga uye nekuda kweizvozvo iwe haufanire kutanga zvinhu zvitsva, kana kuita zvakakosha mitezo, mauri unofanirwa kuve wakarongeka, nekuti iwe ungangove usingave.
Nyanzvi: Iri harisi zuva rakakodzera kuita nhaurirano dzinoda kushandisa njere. Yako yepamoyo, asi zvakare inonzwisisika nyika, iri mukukanganiswa kukuru. ... Zvimwe
Rupo nerudo zvinowanda nhasi. Iwe unobvuma kunzwisiswa uye rudo rwe nharaunda yako, apo iwe, unowanzo batsira nyika yese zvese nenzira yekuita uye nepfungwa.
Nyanzvi: Une hanya nevamwe uye vanozvinzwa. Nguva yakanaka yekushanda nevamwe uye kunyanya nenhengo dzemhuri yako uye kuvaita kuti vanamatire kuzvirongwa zvavo. Kuti vabudirire iwe unogona kuva nechokwadi chekuti ichave nemhedzisiro yakanaka pauri zvakare. ... Zvimwe
Rakanaka zuva rehutano. Inokupa hutano hwakanaka uye inokupa kugadzikana, nepo mupfungwa iwe uchinzwa wakasimba uye unogona kukunda chero dambudziko raungave uine. Zuva iri rakanakira zviitiko zvinoda kupinda kwevanhu. Kuzivikanwa kwako kuri kukura zvakanyanya nhasi.
Rudo: Unonzwa kugarisana uye kuva nerunyararo newe uye izvi zvinovandudza hukama hwako hwese, kunyanya vepedyo. Iye zvino unogona kuratidza chaizvo zvaunoda kubva pahukama hwako, zvinhu zvipi zvinokufukidza uye izvo zvisingaiti.
Nyanzvi: Unonzwa zvakanaka uye izvi zvinoonekwa pabasa rako. Nguva yakanaka yekutaurirana. Mafaro akanaka anogara achifarira kutaurirana uye anoita kuti vabudirire. ... Zvimwe
Kufarira kwako kwakanangidzirwa pamba uye nharaunda yemhuri. Amai vako vanokutsigira uye vanokusimbisa. ... Zvimwe
Iko kuwirirana kwepfungwa kunoratidzwa nhasi, kunoita kuti uve unotapira uye kunopisa pfungwa yekuchengeteka kune avo vakakukomberedza. Ivo vanokuona iwe seanoreurura uye iwe unonyanya kuda kuvateerera uye kufemerwa zvakanyanya kuvapa iwo chaiwo mazano. ... Zvimwe
Zviito zvako zvinoonekwa nekuwedzeredza. Iko kune kubatikana nehurukuro dzefilosofi kufarira uye maitiro ekuratidzira mufananidzo wexerola. ... Zvimwe
Kufanotaura kwemazuva ese - Kufamba, Mepu, Zviso, Mapuraneti, Dzimba, Zodiac zviratidzo uye Zvimwe
Yekuzvarwa Horoscope Mahara
Mepu, Zviso, Mapuraneti, Dzimba, Zodiac zviratidzo uye Zvimwe
Guta kana Musha
Nyora guta kana musha (uye matauriro kana iwe ukanyora chiGreek muchidimbu kana bhiefiti) uye wozvimirira kuti zvionekwe masekondi mashoma gare gare mubhokisi rinozovhura kana iwe warega kutaipa. Kana pasina guta kana musha unowanikwa, nyora mavara echiChirungu, uye / kana sarudza Nyika mubhokisi rapfuura. Iwe unogona zvakare kunyora chete ekutanga mavara eguta uye mirira kuti mhedzisiro iite sarudza.
Kana usina kusarudza Nyika uye ukashandisa Nyika Yose unogona kutaipa zvakare nyika kudzikisira mhinduro. KuUnited States chete nyora US uye kwete United States. Semuenzaniso kana guta rako riri San Francisco, nyora
zuva francisco us
Kana iro guta riri Washington nekuti maWashington akawandisa unogona kunyorawo muenzaniso wenyika: Washington us
Asi kana wakasarudza Nyika kare uye ukashandisa United States semhando nyora chete guta / dhorobha / musha kwete nyika.
Kana iwe ukaedza kuyedza kutsvaga guta rako uye chinyorwa chinoita kunge chisiri kushanda, semuenzaniso haugone kuona vhiri rinotenderera riri kurudyi kwebhawa kwaunonyora, ingo teedzera guta kana backspace iyo tsamba yekupedzisira uye nyora zvakare.
Yakavanzika Mutemo Chibvumirano cheRisense Rubatsiro About